Momba anay | TaiZhou HuangYan Yjie Plastics Co., Ltd.
TaiZhou HuangYan Yjie Plastics Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 1996 ary miorina ao amin'ny tanàna malaza vokatra plastika, tanànan'i Huangyan any Shina. Rehefa afaka 24 taona fampandrosoana, Yjie lasa iray amin'ireo mpanamboatra lehibe ao Shina, mifantoka amin'ny fikarohana, famolavolana, famokarana ary ny marketing ny vokatra vaovao plastika hevitra toy ny kaopy sy tavoahangy, houseware sy OEM & ODM vokatra hafa.
YJie dia manana mpiasa matihanina 100 izay misy momba ny injeniera, mpamorona, teknisiana zokiolona ary karazana talenta afovoany sy ambony, ary ekipa varotra, R&D, famokarana, fitantanana ary serivisy aorian'ny varotra. Yjie dia afaka mahatratra ny vola mitentina 5 tapitrisa dolara amerikana isan-taona.
Nahazo mari-pahaizana tamin'ny fanamarinana ISO9001, SA8000 ary Sedex, Yjie dia nanangana rafitra fanaraha-maso kalitao feno, mandalo ny fomba famokarana rehetra. Ireo fitaovana dia avy any Japon & Korea & China no tena nalaina. Izahay koa dia nanangana ny laboratoara fitiliana ara-materialy, ary mampihatra rafitra fanaraha-maso henjana momba ny fidiran'ny fitaovana, ny fanodinana ny vokatra, ny fandefasana entana izay miantoka ny "Kalitao aloha" avy amin'ny loharano ka hatramin'ny vokatra farany.
Wsatroka Izahay dia manao
Yjie dia miavaka amin'ny R&D, Famokarana ary fanaovana kaopy plastika, tavoahangy plastika, tavoahangy PET, barware ary vokatra plastika atsofoka & mitsoka
Ny fangatahana dia misy ny fampiroboroboana, fanomezana, fonosana, kojakojan-trano, bara sns.
Tian'i Yjie hizara ny vinan'ny orinasanay aminareo rehetra. Miankina amin'ny vina sy ny paikady eran-tany i Yjie dia natokana hanome vokatra an-trano plastika miavaka amin'ny tsena manerantany.
'YJie, ny safidy tsara indrindra amin'ny fomba fiaina vaovao' dia manoratra ny angano.
Tavoahangy misy alika ho an'ny biby, Fonosana ho an'ny tavoahangy divay, Barware plastika, Barware Set, Barware fampiroboroboana, Barware tsy vaky,